ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုဖိတ်ခေါ်သည့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၏စကားလုံး ၂၀၀ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သူ Manuel | | စာပိုဒ်တိုများ
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၏အသုံးအနှုန်းများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုအများဆုံးသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ဤပညာရှင်များသည်လူသားတို့အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်ကြသည်ကဲ့သို့ တည်ရှိမှု၊ အသိပညာ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား၊အခြားအမှုအရာအကြား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဖတ်တဲ့သူတွေဆီကရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေကိုဖိတ်တာ။
၎င်းတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်ဖတ်ခြင်းအပြင်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်၎င်းအတွေးနှင့်သဘောတူကြောင်းပြသခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုအခြားလူများနှင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်ဤစာပိုဒ်တိုများကိုသင်ရှာဖွေရသည့်အကြောင်းရင်းမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ Self Help အရင်းအမြစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှ၎င်းတို့ကိုအကြီးမားဆုံးသောအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းရန်အသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်ဤလည်းလိုက်ပါသွားလျက်ရှိသည် ဒphilosophနစာပိုဒ်တိုများပုံရိပ်တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်း; ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဝေခွင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးပရိုဖိုင်းများပေါ်တွင်စာပိုဒ်တိုများပါသောဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများကိုတင်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်။
ဘုရားသခင်သေပြီ သေပါစေ အကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုသတ်ပါပြီ။ - Friedrich Nietzsche ။
လူသည်ဘုရားသခင့်အမှားမျှဖြစ်သလော၊ - နစ်ရှေး။
ငါဘာလို့ဆန်နဲ့ပန်းတွေ ၀ ယ်ရတာလဲလို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ ငါအသက်ရှင်ဖို့ဆန်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အဘို့အအသက်ရှင်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့ပန်းပွင့်။ ကွန်ဖြူးရှပ်
အသက်ရှင်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိသလား။ ဒါဟာအားလုံးကစားသမားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒဗလျူဂျိမ်း
တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားပြီးသင်ဖွင့်ဟ။ သံသယအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းထက်သင်မိုက်မဲနေသလားဟုလူတို့အားတွေးတောစေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ - ဂျိမ်းစ်ဆင်ကလဲ။
တစ်ခါတလေလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားမှုတွေမဖျက်ဆီးချင်တဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုမကြားချင်ကြဘူး။ - Friedrich Nietzsche ။
ဒေါသကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းသည်အဆိပ်ကိုသောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူတစ် ဦး သေဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်တူ၏။ - ဗုဒ္ဓ
ဉာဏ်ကိုမယုံကြည်နိုင်မီနှလုံးကိုထိမိစေရန်နှင့်ခန့်မှန်းရန်လိုအပ်သည်။ ခ Pascal ။
နားထောင်ရန်သင်ယူပါ၊ မကောင်းစွာပြောဆိုသူများပင်လျှင်သင်အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။ - Plutarch ။
လွှတ်ပေးရန်သင်ယူခြင်းသည်အောင်မြင်ရန်သင်ယူခြင်းမပြုမီလေ့လာသင့်သည်။ ဘဝကိုထိမိရမည်၊ သင်အနားယူရန်လိုအပ်သည်၊ အနားယူရန်ကျန်သည်။ Ray Bradbury
ကလေးများကိုကောင်းစွာပညာပေးသူများသည်၎င်းတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးသူများထက် ပို၍ ဂုဏ်တင်သင့်သည်။ ယခင်ကသူတို့ကိုသာလျှင်အသက်ရှင်စေပြီး၊ နောက်တစ်ခုကကောင်းမွန်သောနေထိုင်မှုအနုပညာဖြစ်သည်။ - အရစ္စတိုတယ်။
ရှုံးနိမ့်မှုတိုင်းသည်လူတစ် ဦး အားသူသင်ယူရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုသင်ပေးသည် ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း
လူတစ် ဦး စီသည်သူနေထိုင်သောအချိန်ကာလ၏သတ္တဝါဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဤအတွေးအခေါ်များထက်အနည်းငယ်သာမြင့်တက်နိုင်သည်။ - ဗော်တဲယား။
သင်သည်သင်၏ခြေဖြင့်မြေကိုနမ်းနေသကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ပါ။ Thich Nhat
အခက်ခဲဆုံးအောင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သူ၏အလိုဆန္ဒများကိုအောင်နိုင်သူသည်ရန်သူများကိုအောင်နိုင်သူထက် ပို၍ ရဲရင့်သည်ဟုငါထင်သည်။ အရစ္စတိုတယ်
သင်၏ဘ ၀ သည်အသက်ရှင်ရကျိုးနပ်ပြီးထိုယုံကြည်ချက်သည်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ - ဝီလျံဂျိမ်းစ်။
ဘဝကိုလေးစားခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ မထားသည့်မည်သည့်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဒphilosophနမဆိုစစ်မှန်သောဘာသာတရားသို့မဟုတ်ဒphilosophနမဟုတ်ပါ။ - အဲလ်ဘတ် Schweitzer ။
မည်သူမဆိုဒေါသထွက်နိုင်သည်၊ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောလူ၊ မှန်ကန်သောဘွဲ့၊ အချိန်မှန်၊ မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဒေါသထွက်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ အရစ္စတိုတယ်
လုံခြုံရေးအတွက်လွတ်လပ်မှုကိုညှိနှိုင်းသူတိုင်းသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုမထိုက်တန်ပါ။ - Benjamin Franklin ။
အားနည်းသောအခါအားနည်းသောအခါ၊ အားနည်းသောအခါအားပြပါ။ - Sun Tzu ။
မင်းကပန်းချီကားမဆွဲနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အတွင်းစိတ်တခုကိုသင်ကြားတဲ့အခါ၊ မင်းတတ်နိုင်သမျှပန်းချီဆွဲပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုပိတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဗင်းဆင့်ဗန် Gogh ။
သင်ပြန်မသွားနိုင်သည့်အခါရှေ့သို့အကောင်းဆုံးလမ်းကိုရှာရန်လိုသည်။ ခမညျးတျော Coelho
အခက်အခဲကများလေ၊ ကျော်လွှားနိုင်လေလေဖြစ်သည်။ - ic ပိကုရု။
ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားခဲ့သည့်အရာများကိုနားမလည်ခြင်းသည်သင်ယူခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ အီး Punset
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသောသူတို့ကိုသတိထားပါ။ သူတို့လက်လျှော့လိုက်သည့်အတွက်သူတို့လက်စားချေလိမ့်မည်။ အီး Cioran
စိတ်ဝိညာဉ်သည် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။ အီး Punset
သူငယ်ချင်းကပိုက်ဆံနဲ့တူရမယ်၊ မလိုအပ်ဘဲတန်ဖိုးတစ်ခုသိဖို့လိုတယ်။ ဆိုကရေးတီး
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်စိကန်း၏။ G. အ Lichtenberg
ဦး ခေါင်း၊ နှလုံးနှင့်အာရုံများကိုတစ်ပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ - လာအို။
နုပျိုသောချစ်ခြင်းမေတ္တာက "မင်းကိုငါလိုအပ်တာကြောင့်ငါမင်းကိုချစ်တယ်" လို့ပြောတယ် ရင့်ကျက်တဲ့လူက“ မင်းကိုငါချစ်တဲ့အတွက်မင်းကိုငါလိုအပ်တယ်” လို့ပြောတယ် - Erich Fromm ။
ဘယ်သူမှဗဟုသုတမရကြဘူး။ - ဂျွန်လော့ခ်။
အသိပညာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ - Francis Bacon ။
အားနည်းသူသည်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါ။ မေ့လျော့ခြင်းသည်အားကြီးသောသူ၏ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်သည်။ - မဟတ္တမဂန္ဒီ။
အလိုဆန္ဒသည်လူ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ - စပင်နိုဇာ။
ထူးချွန်ထက်မြက်သောစွမ်းရည်သည်ဉာဏ်ရည်ရှိသူများနှင့်အခြားသူများ၏ထက်သာလွန်သောလူမှုရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများထက် ၄ င်းတို့ကိုထုတ်လွှင့်ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်စွမ်းအားမှလာသည်။ အမ် Proust
လူသည်တစ်ခုတည်းသောသတ္တ ၀ ါဖြစ်သည်၊ အမ် Twain
လူသည်အရာတိုင်း၏အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ - Protagoras ။
လူသည်သူဖြစ်ခြင်းကိုငြင်းပယ်သောတစ်ခုတည်းသောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
လူသည်မိမိ၏သဘောသဘာဝနှင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည် - Jean-Paul Sartre
လူသည်လွတ်လပ်မှုအတွက်စီရင်ခြင်းကိုခံရသည်။ - ဂျင်း။ - Paul Sartre
ပညာရှိကလက်တွေ့ကျတဲ့အရာတစ်ခုခုဆီသို့ ဦး တည်မှသာလျှင်သူသည်မိမိ၏ရောဂါများကိုတွေးသည်။ အားလုံးအခြားအချိန်လေးအခြားအမှုအရာမှမြှုပ်နှံနေကြသည်။ ခ Russell
လူသည်အခမဲ့မွေးဖွားခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်နေရာတိုင်းတွင်ချည်နှောင်ထားသည်။ - Jean-Jacques Rousseau
လူသည်အခြေအနေ၏ကလေးမဟုတ်သော်လည်းအခြေအနေသည်လူ၏သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ Epicurus ။
ပညာရှိသောသူသည်မိမိအလိုရှိရာကိုရှာတတ်၏။ ပညာမဲ့သောသူသည်အခြားသူတို့တွင်ရှာတတ်၏။ ကွန်ဖြူးရှပ်
အဆိုပါသူရဲကောင်းအမြဲသီလအတွက်ထင်; သာမာန်လူဟာနှစ်သိမ့်မှုအမြဲပေးတယ်။ - ကွန်ဖြူးရှပ်။
သတ္တိရှိသောသူသည်မိမိ၏ရန်သူများထက်သာလွန်သည်သာမကသူ၏အပျော်အပါးကိုလည်းပါတတ်သည်။ - Democritus ။
မဆိုနာကျင်မှု၏ကန့်သတ်ပင်ပို။ နာကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အီး Cioran
ဆရာသည်သဘာဝသဘောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၏မှန်ကန်သောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ Protagoras ။
အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုတီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။ အက်ဖ် Ford ကား Coppola ။
အပန်းဖြေမှုသည်ဒofန၏မိခင်ဖြစ်သည်။ - သောမတ်စ်ဟော့ဘ်စ်။
အတိတ်ကာလသည်ယခုအချိန်တွင်အာဏာမရှိပါ။ - Eckhart Tolle ။
ဉာဏ်ပညာ၏ပထမခြေလှမ်းမှာအရာအားလုံးကိုအပြစ်ဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောအရာအားလုံးနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်။ GC Lichtenberg
လူမှုတိုးတက်မှုကိုအမျိုးသမီးလိင်၏လူမှုရေးအနေအထားဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။ - မာ့က်စ်။
ဆင်ခြေပေးတတ်သူသည်အခြားအရာများနှင့်မလုံလောက်ပါ။ - Benjamin Franklin ။
အတွေးကြီးတွေကိုစဉ်းစားတဲ့သူကအမှားကြီးတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ - မာတင် Heidegger ။
ပညာရှိသည်စကားအားဖြင့်သာမဟုတ်၊ အပြုအမူအားဖြင့်သွန်သင်သည်။ လာအို
နေကနေ့တိုင်းအသစ်ဖြစ်သည်။ - Heraclitus ။
Touch ဆိုတာရန်သူမလုပ်ဘဲတစ်ခုခုကိုပြတဲ့အနုပညာပါ။ - Isaac Newton
Talent ဘယ်သူမှမထိနိုင်တဲ့ပစ်မှတ်ကိုထိ; အဆိုပါ Genie အခြားမည်သူမျှမမွငျနိုငျသောပစ်မှတ်တာမျိုး။ - Schopenhauer ။
ရဲစွမ်းသတ္တိသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲကြောက်ရွံ့ခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအခြားအရာတစ်ခုခုရှိသည်ဟူသောအမြင်ဖြစ်သည်။ A. Redmoon ။
ဆောင်းရာသီရဲ့အဆုံးမှာတော့ငါမအောင်နိုင်နိုင်တဲ့နွေရာသီဟာငါ့အတွင်းမှာရှိနေတယ်။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
အရာအားလုံးထဲမှာအရာအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ - Anaxagoras ။
ဘ ၀ ကိုသုံးကြိမ်ခွဲခြားထားသည်။ လက်ရှိ၊ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်။ ဤအရာ, ပစ္စုပ္ပန်အလွန်အကျဉ်းဖြစ်၏ အနာဂတ်, သံသယ; အတိတ်, စစ်မှန်တဲ့။ Seneca
သင်၏စိတ်ထဲ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကြောင့်သင်ဟာသင်နှင့်သင်ရှိနေသည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်။ သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲပြီးသင့်ရဲ့စိတ်ထဲထဲဝင်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ Zig Ziglar
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတိတ်လမ်းကြောင်းထက်နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ အဆုံးသို့ရောက်သောအခါမျှတစွာဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြပါစို့။ Epicurus ။
ဒါငါ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာတရားပဲ ဘုရားကျောင်းများမလိုအပ်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသောအတွေးအခေါ်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိမာန်ဖြစ်သည်။ ဒyနသည်ကြင်နာမှုဖြစ်သည်။
ငါတို့အိပ်ပျော်နေပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာငါတို့အိပ်မက်တွေမက်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားတယ်။ - Ludwig Wittgestein ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်မမြင်နိုင်သောချည်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များမှသားကောင်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်သေးနှင့်ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်သည်။ GS Rawling ။
မလှုပ်မရှားဖြစ်ခြင်းသည်သေခြင်းကိုတိုတောင်းသောကြောင့်၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းသည်ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုက်သောသူမူကားမာနကြီး။ ရဲရင့်တတ်၏။ ဗုဒ္ဓ
ယောက်ျား၏မိန့်ခွန်းများထက်ယောက်ျားလေး၏မမျှော်လင့်သောမေးခွန်းများမှသင်ယူစရာများမကြာခဏရှိသည်။ - ဂျွန်လော့ခ်။
မှားသောရွှင်လန်းမှုပင်များသောအားဖြင့်စစ်မှန်သော ၀ မ်းနည်းမှုထက်ပိုနှစ်သက်သည်။ ဖယ်
ပစ္စုပ္ပန်ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြသော်လည်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သည်သူတို့နေထိုင်နေသည့်ဘဝမဟုတ်ဘဲအခြားဘဝကိုရှင်သန်နေထိုင်ရမည့်အလားကြီးမားသောစိတ်ထက်သန်မှုဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်သူများရှိကြသည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းကုန်ဆုံးသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ Antiphon ။
ဉာဏ်ပညာကို ဦး တည်စေသောလမ်းကြောင်းသုံးခုရှိသည်။ အတု၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, အမြင့်ဆုံး; နှင့်အတွေ့အကြုံ, အ bitterest ။ ကွန်ဖြူးရှပ်
လူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အဖြေတွေကိုမဟုတ်ဘဲသူ့မေးခွန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါ။ - ဗော်တဲယား။
သဘာဝတရားတွင်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောအတားအဆီးတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ၏အတွေးနှင့်အခြားတစ်ခု၏အတွေးအကြားဖြစ်သည်။ ဒဗလျူဂျိမ်း
သော့ချက်ကမင်းကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လူတွေနဲ့အတူရှိနေခြင်းကသင့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်။ - Epithet ။
ဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိခြင်းပဲ။ - ထိုသို့သော။
ပညာရေးကယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်တယ်။ ယုံကြည်မှုကမျှော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးပေးသည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်။
မျှော်လင့်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဘာမျှမရှိသောသူတို့၌မြော်လင့်စရာရှိ၏။ - ထိုသို့သော။
ပျော်ရွှင်မှုဟူသည်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်၊ လူသားတည်ရှိမှု၏ပန်းတိုင်နှင့်အဆုံးဖြစ်သည်။ - အရစ္စတိုတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယာယီမျှသာဖြစ်သည်။ အီး Punset
ပျော်ရွှင်မှုသည်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘဲစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခု၏စံနမူနာဖြစ်သည်။ - Immanuel Kant ။
ပြည်နယ်တိုင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာလူငယ်များ၏ပညာရေးဖြစ်သည်။ - Diogenes ။
နှိမ့်ချခြင်းသည်သင်နည်းသည်ဟုမထင်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်စဉ်းစားနေသည်။ - CS Lewis ။
ကောင်းကင်၌လူတန်းစားတန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်းဟူသောအတွေးသည်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းသောအရာက၎င်းကိုဆင်းရဲသူများ၏အမြင်တွင်နှစ်သက်စေသည်။ G. အ Lichtenberg
စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆိုသည်မှာလူသားအားသူနှင့်မတူသောအရာများကိုလျော်ကြေးပေးရန်ပေးသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟာသဉာဏ်သည်သူဖြစ်သည့်အတွက်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ရန်ပေးသည်။ O. ဝိုင်း။
အဲဒီမှာအကြီးမြတ်ဆုံးဉာဏ်ပညာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိခြင်းဖြစ်တယ်။ Galileo Galilei ။
လူအများစုကတုန့်ပြန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နားထောင်ကြပြီးနားလည်လိုသည့်ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲနားထောင်ကြသည်။ AC ဒို
စိတ်ကအရာအားလုံးပါ။ သင်ဖြစ်လာသည်ဟုထင်သော ဗုဒ္ဓ
လူနေမှုဘ ၀ အခက်အခဲကလူအချို့ကိုအသက်ဆက်ရှင်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်လာနိုင်သည်။ အေ Polgar
လူ့ဘ ၀ သည်လူ့ဘ ၀ ဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မြတ်သည်ဟူသောအယူအဆသည်အလယ်ခေတ်ဖြစ်သည်။ - Peter Singer ။
သည်းခံခြင်းခါးသီးသော်လည်းအသီးသည်ချို၏။ - ဂျင်း။ - Jacques ရူးဆိုး။
အတွင်း၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိ၏။ အပြင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ ဗုဒ္ဓ
ဘာသာတရားသည်ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ခံရသူများ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပြည်သူတို့၏ဘိန်းဖြစ်သည်။ - ကားလ်မာ့က်စ်။
ကံကောင်းခြင်းသည်ပြင်ဆင်ထားသည့်စိတ်ကိုသာနှစ်သက်သည်။ As ဇာက်သည် Asimov ။
အမှန်တရားကသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာအငြင်းပွားမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ - David Hume
ဘဝသည်အစဉ်မပြတ်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်သည်။ - Schopenhauer ။
ဘဝကိုနောက်ပြန်နားလည်ထားရမည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုရှေ့ဆက်နေရမယ်။ - Kierkegaard ။
လူသား၏ဘဝ (သဘာဝအခြေအနေ) သည်အထီးကျန်၊ ဆင်းရဲ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်၊ ရေနံစိမ်းနှင့်တိုတောင်းသည်။ - သောမတ်စ်ဟော့ဘ်စ်။
ဘဝဟာမှန်ကဲ့သို - ငါပြုံးလိုက်ရင်မှန်ကပြန်ပြုံးလိုက်တယ်။ အမ်ဂန္ဒီ။
ဘဝဟာအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ - ကွန်ဖြူးရှပ်။
အခက်အခဲများသည်သာမန်လူတစ် ဦး အားထူးကဲသောကံကြမ္မာအတွက်ပြင်ဆင်လေ့ရှိသည်။ - CS Lewis ။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမလိုအပ်ဘဲများပြားမနေသင့်။ - ဝီလျံက de Ockam ။
ထင်မြင်ယူဆချက်အသစ်များသည်အမြဲတမ်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုဘုံမဟုတ်သည့်အချက် မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပယ်ချလေ့ရှိသည်။ ဂျေလော့ခ်
လှပသောစကားများသည်မရိုးသားပါ၊ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ပြောသောစကားများသည်ကြမ်းတမ်းသောစကားမဟုတ်ပါ။ လာအို
လူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးသလိုပျော်ရွှင်ကြတယ်။ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်။
ဘ ၀ တွင်သင်ယူရန်အခက်ခဲဆုံးအရာမှာမည်သည့်တံတားကိုဖြတ်ကူးရမည်နှင့်မည်သည့်တံတားကိုလောင်ကျွမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ခ Russell
အမှန်တကယ်မူရင်းစိတ်ကိုခွဲခြားသိမြင်စေသောအရာမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုပထမဆုံးမြင်မြင်ချင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်ဟောင်းနွမ်းသောအရာများ၊ လူသိများ၊ မြင်တွေ့မြင်ခြင်းနှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းတို့ကြောင့်အသစ်သောအရာများအဖြစ်မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နစ်ရှေး
အဘယ်အရာကိုဆင်ခြင်တုံတရားသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးအစစ်အမှန်သည်ဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်သည်။ - GWF Hegel ။
ကျွန်ုပ်တို့ပြည်တွင်း၌အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပအဖြစ်မှန်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ - Plutarch ။
ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာကမင်းငါ့ကိုလိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အခုမှငါမင်းကိုယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နစ်ရှေး
ယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ် ဦး မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ထင်မြင်သည်ကိုသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ HD Thoreau ။
သူငယ်ချင်းများသည်ခရီးသွားဖော်များနှင့်တူပြီး၊ ပို၍ ပျော်ရွှင်သောဘဝလမ်းစဉ်၌တည်မြဲနေစေရန်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကူညီပေးသင့်သည်။ - Pythagoras ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေကြတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးသမားတွေ။ ခ Russell
ရလဒ်ကောင်းများသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးရန်လိုအပ်သည်။ - Heraclitus ။
ပညာရှိသောသူတို့သည်စကားပြောနိုင်သောအခွင့်ရှိကြ၏။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တစ်ခုခုပြောဖို့လိုလို့ပဲ။ - ပလေတို။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်မပြောသောအရာများကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပိုမို ၀ မ်းနည်းရသည်။ - Fyodor Dostoevsky ။
ဘယ်အရာကမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ T. Carlyle ။
အနည်းငယ်မျှသာတတ်နိုင်သောသူအတွက်လုံလောက်သောအရာမရှိပါ။ - ic ပိကုရု။
ဘယ်သူမှမိုက်မဲတဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူး၊ မကောင်းတာကသူတို့ကိုအလေးအနက်ပြောတာပဲ။ Michel Eyquem de Montaigne
ငါတို့ကိုအဘယ်သူမျှမကယ်တင်နိုင်။ ဘယ်သူမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူမှမလုပ်သင့်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ရမည်။ ဗုဒ္ဓ
၎င်းသည်သင်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏တုံ့ပြန်ပုံသည်အရေးကြီးသည်။ - Epithet ။
မင်းဘဝမှာဘယ်လောက်အထိဘယ်လောက်ဝေးဝေးသွားမယ်ဆိုတာမင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်သင့်အားဖြစ်ပျက်သောအရာကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Zig Ziglar
ငါသေမှာကိုမကြောက်ဘူး၊ ဖြစ်သွားရင်ငါအဲဒီမှာမရှိဘူး။ Woody Allen
လူတို့သည်အိပ်မက်များကိုမလိုက်စားတော့သောကြောင့်အသက်ကြီးရင့်လာသည်၊ - ဂါဗြေလ Garcia Marquez ။
ငါတို့လိုချင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်၊ ငါတို့မူကား၊ JP Sartre
ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အတွေးကအဲဒီလိုပဲလုပ်တယ်။ - ရှိတ်စပီးယား။
သင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲထားသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်မပြောင်းလဲသည့်နေရာသို့ပြန်သွားခြင်းကဲ့သို့ဘာမျှမရှိပါ။ - နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုထက်မြတ်နိုးဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ - Tomas de Aquino ။
အကြောင်းပြချက်ထက်သာတူညီမျှဖြန့်ဝေထားသည့်အရာမရှိပါ။ လူတိုင်း၌၎င်းတို့လုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ - ဒေးကား
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်အချို့ကမပြောနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ - စီစီရို။
ဘယ်တော့မှဘယ်လောက်ကြာကြာညဆိုတာမရှိဘူး၊ နေ့ရှာမတွေ့ဘူး။ ဒဗလျူရှိတ်စပီးယား
ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့မစီရင်ပါ။ - ဂျင်း။ - Paul Sartre
ဘယ်သူ့ကိုမှသင်ကြားလို့မရဘူး မင်းကိုစဉ်းစားမိစေတယ် - ဆိုကရေးတီး။
ငါဟာလူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်ပြန်မဝင်နိုင်ဘူး။ - Lewis ကကာရိုး။
လွယ်ကူသောဘဝအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ၊ ခက်ခဲသောအသက်တာကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ခွန်အားပေးပါ။ - ဘရုစ်လီ။
သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်နေ့စဉ်ပျော်ရွှင်နေခြင်းဖြင့်သင်သည်ရဲစွမ်းသတ္တိမရရှိနိုင်ပါ။ ရဲစွမ်းသတ္တိသည်ခက်ခဲသောအချိန်များမှရှင်သန်ရန်နှင့်အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားခြင်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ - ic ပိကုရု။
တစ်ချိန်ကကန် ၁၀၀၀၀ ကန်ကန်ခဲ့ဖူးသောလူကိုငါကြောက်။ အကြိမ် ၁၀,၀၀၀ ကန်၍ လေ့ကျင့်သောလူကိုငါကြောက်မည်မဟုတ်။ - ဘရုစ်လီ။
သင်၏ထင်မြင်ချက်များအတွက်အလွန်ကောင်းရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်၊ ယခုလက်ခံထားသောထင်မြင်ချက်သည်တစ်နေ့သောအခါအလွန်ကောင်းသည်။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
ငါသေမင်းကိုမကြောက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသေလောက်အောင်မြန်မြန်မသွားဘူး ငါပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဖို့အများကြီးရှိသည်။ - စတီဖင်ဟော့ကင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငြူစူမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့မနာလို ၀ မ်းသာခြင်းထက် ပို၍ ရှည်သည်။ - Heraclitus ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွှမ်းမိုးသောအတွေးများ၏ရလဒ်ကိုအမြဲဖော်ပြသည်။ - Soren Kierkegaard ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့ of ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်သည်အဆတိုးများလာသည်။ နက်နဲနက်နဲသောနက်နဲလေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သိရန်ကြိုးစားလေလေကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလိုက်လေလေဖြစ်သည်။ EO Wilson ။
ငါ့အမှားတွေကြောင့်ငါယုံကြည်ချက်အတွက်ဘယ်တော့မှသေမှာမဟုတ်ဘူး။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
စုစုပေါင်းအမှန်တရားကိုဘယ်တော့မှမရောက်ရှိနိုင်ပါ၊ ၎င်းမှလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမရှိပါ။ အရစ္စတိုတယ်
သင့်ကိုမည်သူအုပ်ချုပ်နေသည်ကိုလေ့လာရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ခွင့်မပေးသူကိုသာရှာပါ။ - ဗော်တဲယား။
ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်: ချက်ချင်းစတင်ပါ။ ဒါကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ဒဗလျူဂျိမ်း
သင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားပါ။ - Timothy Leary
ထို့ကြောင့်ငါရှိသည်ဟုထင်မြင်သည် ("Cogito, ergo sum") - ဒေးကား။
သင်၏ဥယျာဉ်ကိုစိုက်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားပန်းပွင့်ပေးရန်မစောင့်မှီသင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုအလှဆင်ပါ။ ဗာဂျီးနီးယား။ A. အ Shoffstall ။
ငါတို့လုပ်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်တော့ပိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူသင့်တယ်။ ထိုမာနကိုတီထွင်ရန်မရှိသေးပါ။ အီး Cioran
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုစိတ်ကူးနိုင်ပြီးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်။ အီး Cioran
သင်သည်သင်၏အချစ်နှင့်ချစ်ခင်မှုကိုသင့်ထက် ပို၍ ထိုက်တန်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်စကြာ ၀ theာတစ်ခုလုံးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ပြီး၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာမတွေ့ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်၊ စကြာ ၀ inာရှိမည်သူမဆိုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုရထိုက်သည်။ ဗုဒ္ဓ
လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတစ်နှစ်လောက်စကားပြောတာထက်စာရင်တစ်နာရီကျော်ကြာကစားနိုင်တယ်။ - ပလေတို။
သူတို့၏သဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ - စပင်နိုဇာ။
အနာရောဂါငြိမ်းစရာအချိန်ကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ - Hippocrates ။
ရလဒ်ကောင်းကိုအခြားသူ၏နေရာတွင်အမြဲ ထား၍ အခြားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်မည်သို့ပြုမည်ကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည်။ AC ဒို
အချို့သောထုတ်ဖော်ပြသည့်လေကြောင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအရပျားကောင်သည်၎င်း၏အတောင်များ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္shapeာန်နှင့်အလေးချိန်ကြောင့်ပျံသန်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့သော်ပျားကောင်သည်မသိရ။ ပျံသန်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဗြဲ Sikorski ။
မကောင်းဘူး၊ စိတ်ပူတာကအတိတ်ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ရင်မင်းကတခြားဂြိုလ်တစ်လုံးပေါ်မှာနေပြီးတခြားအဖြစ်မှန်နဲ့နေထိုင်နေတယ်။ ဒဗလျူဂျိမ်း
အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်မရှိခဲ့ပါက၎င်းကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။ - ဗော်တဲယား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မထီမဲ့မြင်ပြုသူများ၏လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုမယုံလျှင်၎င်းကိုလုံးဝမယုံကြည်ပါ။ - Noah Chomsky ။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်လိုပါကသူတို့၏တူညီသောအငြင်းပွားမှုများကိုအသုံးပြုပါ။ အရစ္စတိုတယ်
သငျသညျခစျြခံရဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ချစ်ဖို့ရှိသည်။ Seneca
သင်၌အရည်အသွေးတစ်ခုရှိလိုပါက၊ - ဝီလျံဂျိမ်းစ်။
သင်၏အစ်ကိုသည်သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင်၊ သူ့အမှားကိုမမှတ်ဘဲသူသည်သင်၏ညီအစ်ကိုဖြစ်၏။ - Epithet ။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားပါကဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေသည့်အကြောင်းရင်းရှိသည်။ အကြောင်းရင်းမှာသဘောထားဖြစ်သည်။ - ဝီလျံဂျိမ်းစ်။
စံမှသွေဖည်ခြင်းမရှိလျှင်တိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ - ဖရန့် Zappa ။
ထို့ထက်ကားလူများကိုမကြောက်ပါနှင့်၊ သူတို့သည်သင့်ထက် ပို၍ ရှေးရိုးစွဲသူများဖြစ်သည်။ နပိုလီယံ bonaparte
အမှားနှစ်ခုသာရှိသည်။ အမှားတစ်ခုသာရှိသည်။ လမ်းတလျှောက်လုံးမသွားနဲ့၊ - ဗုဒ္ဓ
ပျော်ရွှင်မှုရရန်နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိပြီးသင်၏ဆန္ဒမပြည့်မီနိုင်သောအရာများအားစိုးရိမ်ခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Epithet ။
နတ်ဘုရားတစ်ပါး၊ အသိပညာနှင့်နတ်ဆိုးတစ်ပါးသာရှိသည်။ - ဆိုကရေးတီး။
လေးနက်သောအတွေးအခေါ်ပြproblemနာတစ်ခုသာရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
တစ်ခုတည်းသောအရာကအိပ်မက်ကိုမဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်ခြင်း။ Paulo Coelho
ကျွန်ုပ်တို့သည် chameleons များနှင့်တူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်းကျင်နှင့်သူတို့တွင်ရှိသောကိုယ်ကျင့်တရား၏အရောင်ကိုယူထားသည်။ ဂျေလော့ခ်
ကျနော်တို့ထပ်တလဲလဲလုပ်ပေးသောအရာကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ထူးချွန်မှုသည်လုပ်ရပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။ - အရစ္စတိုတယ်။
ငါသည်အသက်ရှင်သောပညာရှိဖြစ်၏။ ငါသိသောအရာတခုတည်းဟူမူကား၊ - ဆိုကရေးတီး။
သီအိုရီအရကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ခံစားမှုအရှိဆုံးမျိုးဖြစ်သည်။ အီး Punset
ထိုမျှမက၊ - Diogenes ။
အမှန်တရားအားလုံးကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အဓိကအချက်ကသူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။ - Galileo Galilei ။
နာကျင်မှုအားလုံးသည်ပြင်းထန်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါကအလွယ်တကူခံရနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပြင်းထန်လျှင်၎င်းသည်တိုတောင်းပေလိမ့်မည်။ - စီစီရို။
လူတိုင်းကသင်ထင်မြင်သည့်အရာကိုမြင်ပြီးသင်အမှန်တကယ်မည်မျှတွေ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ - Machiavelli ။
ကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးဟာငါတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်။ O. ဝိုင်း
ကောင်းမွန်သောဘ ၀ သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးပြီးဥာဏ်ရည်ဖြင့်လမ်းပြသည်။ ခ Russell
တစ်ခုမှာမြစ်တစ်စင်းကိုနှစ်ကြိမ်လှမ်း။ မရပါ။ - Heraclitus ။
စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကိုမင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာသွားပါ။ သင်စိတ်ကူးထားသောဘဝကိုနေထိုင်ပါ။ - Thoreau ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၁ ရာစု၏နည်းပညာပြောင်းလဲမှုများနှင့် ၁၉ ရာစု၏လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူနေထိုင်သည်။ အီး Punset
ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ - Leibniz ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းမှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူး။ - နစ်ရှေး။
ဤအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ (သို့) အတွေးအခေါ်ပညာရပ်များနှင့်အတူရုပ်ပုံများနှင့်သင်တို့၏နှစ်သက်သဘောကျမှုနှင့်၎င်းတို့စုဆောင်းထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကိုသင်ဖတ်ရှုရခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မျှဝေရန် (သို့) အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်နေရာတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစကားစုကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖိတ်ခေါ်သည့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၏စကားစု ၂၀၀၂
အသိအမှတ်ပြု Dadaist ကဗျာများ၏စုစည်း